प्रकासपुरमा चामल बेचेर पहिलो पटक बाटो खोल्ने मिश्र - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन १७, २०७५ समय: ४:३९:०३
मदन अधिकारी / प्रकाशपुर नेपालको तराइ भेगका कथाहरु प्राय उस्तै हुने गरेका छन् । कुनै समय जंगलले भरिएको तराइका जमिनहरुमा विस्तारै वस्ति वितार भएको कथा हामी सवैकालागि नौलो विषय भने हैन । जंगलले भरिएको तराइमा आवाधी वढ्न थालेपछी स्थानियहरुकै अगुवाइमा विभिन्न विकास निमार्णका कामहरु भएका तथ्यगत प्रमाण भेटिन्छ । तिनै भिडमा प्रकासपुरमा पहिलो पटक सडक विस्तार गर्ने व्यक्तिको नाम लिदा आउने नाम सूर्य प्रसाद मिश्रको हो । मानिस जन्मनु मर्नु प्रकृया हो, तर मानिसले गरेको कृती मृत्युपस्चात पनि अमर रहन्छ । त्यसैलेपनी लोके कृति कुले वृत्ति भन्ने नेपाली उखान अहिले पनि चलनचल्तीमै छ । २०१२ सालमा मधधेशबाट औलो निर्मुलन हुन पुग्यो । त्यसयता कोहीपनी मधेश जान नरुचाउने मिश्र वताउँछन् । औलोको प्रकोपका कारण त्यसताका मानिसको ज्यानै लिने गर्दथ्यो । तत्कालिन श्री ५ को सरकारले औलो निभारण भएको घोषणा गरेपछी पहाडबाट मानिसहरु मधेश भित्रन थाले ।
यसरी मधेश भित्रनेको भिडमा पहाडमात्र थिएन । अन्य मुलुकमा रहेका गैर आवासिय नेपाली समेतलाई मधेशले तानेको मिश्रको बुझाइ छ । यहि क्रममा भुटानमा बसोबास गरिरहेका मिश्रपनी हालको प्रकासपुरमा आइपुगे । त्यसताका प्रकासपुर अहिलेको जस्तो रहरलाग्दो हैन डरलाग्दो भएको मिश्र बताउँछन् । पातलो आवाधी र घना जंगल अनी जंगली जनावारहरुको त्रासले मधेश सोचेजस्तो थिएन । त्यसोत मधेश आएका मिश्रका छोरा राजनलाई समेत गुमाउनु परेको तितो सत्य र हालिलाग्दो कथा उनका पछाडी लुकेको छ । जंगली हात्तीको आक्रमणबाट आफ्नो छोराको मृत्यु भएको पीडा हालपनी आलै रहेको उनी वताउँछ । त्यसोत अहिले पनी आरक्ष नजिकै भएकाले हात्तीको प्रकोप प्रकासपुर क्षेत्रमा कायमै छ । धमाधम भएको जंगल फडानी र बस्ति विस्तारले लामो समय सम्म निरन्तरता पायो । यही क्रममा मधेशका घना जंगलहरु वस्तिमा परिणत हुन पुगे । त्यही वस्तिहरु मध्येको एक बस्ति भोक्राह गा.वि.स. बन्न पुगेको मिश्र बताउँछन् ।
२०३६ सालताका भोक्राह गा.वि.स.मा रहेको प्रकासपुरले आफ्नै नाम पायो । सो समयमा भोक्राहबाट फुटेर प्रकासपुर गा.वि.स. नामाकरण हुन पुग्यो । प्रकासपुरले नाम आफ्नै पाएको थियो, गा.वि.स. आफ्नै पाएको थियो । तर प्रकासपुरको कहालिलाग्दो अवस्था भने उस्तै थियो । त्यसो त शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने लगभग शुन्य रहेको मिश्र बताउँछन् । २०२१ साल भन्दा अगाडी हालको नवदुर्गा स्कुल नजिक अनुपलाल कायस्थाले केही शुल्क लिएर विद्यार्थीहरु पढाउने गर्दर्थे । यसरी पढाउने भएपनी शिक्षामा सबैको सहभागीता निकै परको विषय थियो । २०२१ सालताका वल्ल शैक्षिक संथालाई सो क्षेत्रमा संथागत गर्न सकियो । हालको प्रकास मा.वि. भएको स्थानमा एक विदालयको स्थापना हुन पुगेको र त्यहीनै सो क्षेत्रको पहिलो विल्द्यालय रहेको मिश्र दावी गर्दछन् । २०४८ सालमा निर्वाचन हुन पुग्यो मिश्र सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेको तर्फवाट प्रकासपुर गा.वि.स. वडा नं. २ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुन पुगेको वताउँछन् ।
आफु निर्वात भएपछी उनैले प्रकासपुरमा सडक विस्तारको काम थालेको उनी दावी गर्दछन् । मानिसले आहोर दोहोर गर्ने गोरेटो सम्म नभएको अवस्थामा आफु निर्वाचित भएपछी सडक विस्तार नगरि स्थानीय विकास हुन सक्दैन भन्ने कुराले मिश्रलाई चिन्तित तुल्यायो । सडक विस्तार गर्न सोचेजस्तो सहज थिएन । एकातर्फ सडक विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोथ त थिएननै अर्को तर्फ सडक विस्तारमा स्थानीयहरु समेत सहयोग गर्ने पक्षमा नरहेको हुँदा आफु दोहोरो समस्याको चपेटामा परेको उनी बताउँछन् । बाटो खोल्नु भनेको त्यसताका अपराधी हुनु जस्तो रहेको उनको वुझाइ छ । त्यती हुँदाहुदै पनी जहाँ इच्छा त्यहा उपाय भनेझैँ मिश्रले एक उपाय निकाली छाडे । २०४८–५० सालताका श्री ५ को सरकारले जनतालाई चामल वितरण गर्ने कार्य ग¥र्यो । मिश्रले सरकारले दिएको चामललाई विक्री गरेर सडक विस्तारका लागि रकमको जोहो गर्ने निर्ण गरे । एक्लो प्रयासले यो काम गर्न निकै कठिन भएपनी मिश्रलाई उनका छोरा राजनको राम्रो समर्थन र सहयोग थियो । आफ्नो योजना मुताविक मिश्रले चामल विक्रीगरी सडक निर्माणको काम थाले । गाउँलेहरुले वडा अध्यक्षले चामल बेचेर खायो भन्ने आरोप खप्नु देखी उनका छोरा राजनलाई घेराबन्दी गर्ने सम्मका हर्कतहरु नभएका हैनन् । तथापी कतव्र्य पथमा लम्एिको उद्देश्यमुखी यात्री यात्राका सानातिना समस्या वाट भग्दैन भनेझैँ मिश्र आफ्नो कतव्र्य पथमा लम्किरहे । निरन्तर गरेको भगिरथको प्रयासबाट अन्त्यतः मिश्रले हालको जुंगे चौक शिकारीथान सडक खण्ड विस्तार गर्न सफल भए । पछि समयको परिवर्तन संगै मानिसमा सडक आवश्यक वस्तु हो भन्ने चेतनाको विकास हुदै गयो । त्यस पस्चात पम?को योगदानलाई स्थानीयहरुले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न थाले । हाल मिश्र प्रकासपुरका पहिलो बाटो खोल्ने व्यक्तिको रुपमा परिचित छन् । हालै आएर सो सडक खण्ड ए.डि.भि.को ठेक्कामा पक्की भईरहदा उनी निकै हर्षित भएको वताउँछन् ।
साउन ०४ गते प्रदेश नं १ बन्द
इटहरी, भोलि साउन ०४ गते प्रदेश नं १ बन्द हुने भएको छ । परिवर्तनबाट स्थापित सकारात्मक विभेद ( आरक्षण ) लाई निस्तेज पार्ने...
इटहरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले तिव्र गतिमा मुलुकको व्यापार घाटा बढी रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त...
सुन्दरहरैचा, मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका स्थित पुर्वपश्चिम लोकमार्गमा कालोपत्रे गरिएको सडक दुई महिना नबित्दै भात्किएको ...
युवतीलाई दुर्व्यवहाँर गरेको भन्दै इटहरीबाट अन्सारी पक्राउ
इटहरी, इमोमा साथी बनी भेट्न् बोलाई दुर्व्यवहाँर गरेको आरोपमा इटहरीमा एकजना पक्राउ परेका छन । सुनसरी हरिनगर १ का २५ बर्षि...